Ingxenye ebaluleke kakhulu umklamo we sakhiwo ophahleni. Ukuze uvimbele kabusha indlu futhi ukuvuza ukuthola Udinga ukukhetha kuphela zokwakha ikhwalithi kahle setha umshayo uhlelo. Amaphutha enziwe ngokuhamba umsebenzi, kungaletha kubo kuqanda, futhi ngenxa yalokho kuzodinga ukulungisa lesi sakhiwo. Abantu abaningi bayawazi indlela yokwenza ophahleni wezandla zakhe, kodwa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi noma yimuphi umuzwa kulesi simo kungcono ukuthemba ochwepheshe. Nakuba kungenzeka ukuba babhekane bebodwa futhi ngokulandela iziqondiso ezithile futhi obzavedshiysya umsizi.
Uphahla kuyinto zezinhlobo ezimbili: a luthi ukutsheka noma flat. Uhlobo lwesibili avame ukusetshenziswa isakhiwo eliphezulu liphumele, ngakho self-wakha okungcono zijwayele bamisa ophahleni inketho. It lethiwa ngenxa yokuma kwayo indawo, egqugquzela Pilling nasemvuleni ukwehla nokugeleza kwawo. ukuma luthi ukutsheka ophahleni eyatholakala sibonga uhlelo umshayo. Ukuba nesithakazelo esikhulu kule ndaba zendlela yokwenza ophahleni, kufanele inikwe lokhu ngokuningiliziwe lemali ukunakwa. Umkhqizi kuthinta zangaphandle ukubukeka ophahleni, kanye nokusebenza yayo ezifana amandla nokuqina kwayo. Indaba for the idivayisi ke ngokuphelele intando round izinkuni. Kufanele kuthathe amabhodi nhlangothi zombili nge engaba mihlanu amasentimitha obukhulu.
Kungcono ukusebenzisa nezikulufi zinc-camera inqubo ukulungisa izingxenye. Indlela yokwenza ophahleni ukuze izindonga esikhathini esizayo bavikelekile imvula? Kumelwe ubeke izingodo ukuze Babengaphezu kwamashumi ibanga kwesigamu imitha. Indawo Ukukhishwa kokuncishiswa kufanele zakonopacheno futhi egcwele amagwebu. Semishayweni ahlelwe ngokuqinile badedelane ngenkathi kokuba pitch kusuka 1.2 kuya 0.6 m, kuncike abakhethiwe ukufulela impahla.
Ibanga esiphezulu phakathi joists uphelele Ondulin, kodwa lapho ebeka ezimise okwama-tile semishayweni kumele afakwe kaningi ngangokunokwenzeka. Lokhu kuvimbela nokuwohloka lathing futhi formwork, ngemva kwalokho ukulungiswa ngenakugwemeka. Ngaphambi kokwenza ophahleni elisophahleni uma kukhona idivayisi, kufanele wazi ukuthi semishayweni zalo ukusikiwa nge shuttering esiqinile amabhodi. Zikhona ongakhetha eziningi zendlela yokwenza ophahleni, futhi akudingekile ukukhetha yibo ukonga kakhulu, ngoba ngemva kwenkathi ethile yesikhathi kuyodingeka ukuba ukutshala ukuphuculwa kwengqalasizinda.
Indlela yokwenza ophahleni futhi ukugwema amaphutha? elula kakhulu. Engingakusho nje ukwazi isikhathi esingakanani izothatha omunye ophahleni. a impahla enjalo yokwakha ezifana ukufulela wazizwa kuyoba iminyaka kungekho kuka nanhlanu, futhi kungcono ukusebenzisa ku oluyisicaba. Slate akaphelelwa impahla yayo iminyaka engamashumi amane, ngemva kwalokho izoqala khumuza ngaphansi ukucindezeleka mechanical. Eminyakeni engaphezu kuka amahlanu uyoba izinto ezifana ibhodi lukathayela, ukufulela umphetho nensimbi. Abaningi nazo ngizibuza indlela ukwenza ophahleni emphemeni futhi ngaleyo ndlela bazivikele umswakama. Ngenxa yalesi gidrobarer ukusetshenziswa - ifilimi hhayi permeable ngokusebenzisa umswakama. Kumele babeka imishayo futhi baxhumane tape ekhethekile ingcina. Landela yonke imininingwane kule nqubo yokwakha lusebenza kahle - umphumela uyoba ophahleni enhle nethembekile.
Verandas ezicwebezelisiwe ngezindlela ezahlukene